पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र बस्ने नागार्जुन दरबारले तिरेन विद्युत् महसुल, कुन मिटरको कति बक्यौता ? (सूचिसहित)  Clickmandu
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र बस्ने नागार्जुन दरबारले तिरेन विद्युत् महसुल, कुन मिटरको कति बक्यौता ? (सूचिसहित)
लाइन काट्ने तयारी
क्लिकमान्डु २०७४ भदौ २७ गते १०:०४ मा प्रकाशित
काठमाडौं । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रयोग गर्दै आएको नागार्जुन दरवारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १ करोड २९ लाख ९१ लाख २२१ रुपैयाँ ५९ पैसा विद्युत् महसुल नतिरेको पाइएको छ ।
प्राधिकरणका बालाजु वितरण केन्द्रकाअनुसार सो रकम मध्ये एक करोड ३ लाख २ हजार ९७७ भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम हो भने २५ लाख ९८ हजार २४४ भने जरिवाना हो ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले प्रयोग गर्दै आएको नागार्जुन शाहीवन बंगलाको नाममा उक्त विद्युत् महसुल बक्यौता रहेको हो ।
ट्रस्टमा गए त्यो पूर्व राजाको हो भन्छन्, हामीले सो दरबार कस्को स्वामित्वमा छ पत्ता लगाउन सकेनौं ।
सो नागार्जुन शाहीवन बंगलाको नाममा नौ वटा मिटर प्रयोगमा रहेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् बक्यौता असुल उपर गर्न १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको र तिर्न नआए लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ । तर सो बक्यौता रकम पूर्व राजाले तिर्ने वा सरकारले नै तिर्ने हो भन्ने बारेमा भने केही पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणले पत्ता लगाएन कस्को स्वामित्वमा छ दरबार ?
बक्यौता विद्युत् महसुल तिराउनका लागि नागार्जुन शाहीवन बंगला कस्को स्वामित्वमा रहेको छ भनी पत्ता लगाउन हिडेको प्राधिकरणको बालाजु वितरण केन्द्रले हालसम्म कुनै भेउ पाउन सकेको छैन ।
प्राधिकरणले नेपाल ट्रस्टको कार्यालय दबारबारमार्गमा सम्पर्क गर्दा आफूलाई सो को जानकारी नभएको भन्दै जवाफ दिइएको प्राधिकरण बालाजु वितरण केन्द्रका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले ट्रस्टमा गए त्यो पूर्व राजाको हो भन्छन्, हामीले सो दरबार कस्को स्वामित्वमा छ पत्ता लगाउन सकेनौं । बंगलाको कर्मचारीले भने महसुल सरकारले तिर्ने हो भन्दै पन्छने गरेको ती अधिकारी बताउँछन् ।
कुन मिटरको कति बक्यौंता ?
क्रम संख्या मिटर नम्बर बक्यौता रकम
१ २२९.२२.२०५ ८१४०४६३.९७
२ २१४.२७.२०१ के २९५७३७.९१
३ २१६.११.२० एल ६९५१६४.७०
४ २१६.२६.२० एल ३९४१७६.८१
५ २१६.२६.२० आर २८८३४८.६३
६ २१६.२६.२०३ ९२६२७.२५
७ २१४.२७.२०३ २२०८४०.७
८ २१६.१२.२० एल २१८१४०.३
९ २२०.११.२० एल ४७४७७.००
कुल जम्मा १२९९१२२१.५९
प्राधिकरणले बक्यौता रकम बुझाउन कोही नआए नागार्जुन शाहीवन बंगलाको लाइन काटिदिने बताएको छ । हामी अझै केही दिन हेर्छौ आएनन् भने हामी लाइन काटिदिन्छौ । यसअघि नारायणहिटी दाबार संग्राहलय भित्र बस्दै आएकी पूर्व मुमा बडामहारानीको प्राधिकरणले लाइन काटिदिदा चौतफी आलोचना भएपछि प्राधिकरणले पुनः जोडिदिएको थियो ।
नारायणहिटी दबार संग्राहलयको विद्युत् महसुल भने नेपाल ट्रस्टले तिर्ने जनाएपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनमा प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको थियो । प्राधिकरणले लाइन काटेपछि पूर्व मुमा बडामहारानी दुई रात अध्यारोमा बस्नु परेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको थियो ।
पाल्पामा हावाबाट बिजुली निकालियो
विद्युत् प्राधिकरणले माग्यो ४ सय ५५ जना कर्मचारी, मिटर रिडरदेखि १० तहसम्म
७५० मेगावाटको पश्चिम सेती बनाउन कुलमान गरे चिनियाँ थ्री गर्जेजसँग सम्झौता
दलहरुको ऊर्जा राजनीतिः कार्यान्वयन हुन नसक्ने महत्वकांक्षी नारा मात्रै
भारतीय मिडियाको समाचार :चीनबाट खोसिएको बुढीगन्डकी भारतलाई